Ciidamada Senegal oo gudaha u galay dalka Gambia si ay dabada uga riixaan madaxweynaha cusub Adama Barrow - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada Senegal oo gudaha u galay dalka Gambia si ay dabada uga riixaan madaxweynaha cusub Adama Barrow
Ciidamada Senegal oo gudaha u galay dalka Gambia si ay dabada uga riixaan madaxweynaha cusub Adama Barrow. [Sawirka: AFP]
Dakar-(Puntland Mirror) Ciidamada dalka Senegal ayaa gudaha u galay Gambia si ay u xaqiijiyaan in madaxweynaha la doortay ee dalka Gambia Adama Barrow uu xilka la wareego, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Senegal.
Arrintan ayaa imaanaysa wax yar kadib markii Mr Barrow madaxweynenimada loogu dhaarshay gudaha safaarada Gambia ee kutaala caasimada Senegal ee Dakar.
Hoggaamiyaasha Galbeedka Afrika ayaa ku hanjabay in ay awooda uga tuuri doonaan Jammeh xoog milatari.
Kornayl Abdou Ndiaye oo ah afhayeenka ciidamada Senegal ayaa sheegay in ciidamadoodu ay gelinkii dambe maanta oo Khamiis ah gudaha u galeen dalka Gambia.
Madaxweynaha la doortay Adama Barrow ayaa amray askarta Gambia in ay ku sugnaadaan xeryahooda.
Boqolaal qof ayaa ka cararay caasimada dalk Gambia ee Banjul iyaga oo ka cabsi qabo dagaalo dhexmara ciidamada Yahya Jammeh iyo ciidamada huwanta ah ee wadamada Galbeedka Afrika.
Khuburada falaanqeysa arrimaha siyaasada ayaa sheegaysa in xaalada Gambia aan la saadaalin Karin halka ay ku dambayn doonto.